Rated 4.69 kubva 5
Rated 4.79 kubva 5
Rated 4.80 kubva 5
Bhuna Yakarurama Bundle
Best VIRGIN REMY Nyasha dzevanhu
Pano paZvizvarwa zvangu zveHIAr Extensions, tinozvirumbidza mumitambo yedu. Zvatinowedzera zvakasikwa uye zvigadzirwa zvevakadzi vane ruvara nevakadzi vane ruvara! Chitupa chedu chinotakura mhandara Remy extensions. Mhandara inoreva kuti bvudzi harina mishonga ine utsinye, uye Remy zvinoreva kuti mvere dzembudzi dzakanyatsorongedzerwa nenzira imwechete kuti kuderedze matambudziko. Tine zvinyorwa zvinowedzera kune hanzvadzi yedu yose. Sangano redu rinogona kunzi "My Natural Hair Extensions" Asi isu tine zvinyorwa zveMatasviki edu akasununguka zvakare!
Nzira yedu yekuwedzera yakashambadza inosanganisira Curly, Kinky Curly, Coily, uyewo Afro Kinky! Ndine chokwadi kuti unogona kuwana mitezo yako yakakwana. Our Straight Extension line inosanganisira Perm Yaki, Coarse Yaki, uye Kinky Straight. Zvose zvezvikwata zvedu zvine matanho ekufananidza. Mafungiro achapiwa munguva pfupi munguva yemberi iri pedyo. Nhengo dzedu dzakakwirira huwandu 100% mhandara yemunhu Remy bvudzi.
Kana uri kuverenga izvi, iwe uri munzira yakarurama yekuwana sarudzo yakanakisisa yezvikwidziri zvisingasanganisi chete zvinoshamisa nevhudzi rako asi kukurudzira bvudzi kukura. Kuwedzerwa kwakakodzera kunoshandiswa zvakanaka kunogona kubatsira bvudzi rako kukura nekugadzira zvinoshamisa zvekudzivirira mafashoni. Rega kukuvadza zororo rako kunze uye kuedza kuwirirana nezvimwe bvudzi rezvitsiga. Kuvandudza bvudzi rako rechisiki, usarishandure!